Ny fahasamihafana ao amin'ny Semalt: Any an-tampon'ny Google sy i Beyond
Mety ho sarotra ny hilaza amin'ny masoivoho mpivarotra misaraka.
Raha ny fandehany fa tsara daholo izy ireo amin'ny marketing. Rehefa manao fanambaràna mampitolagaga toy izany daholo izy ireo - ento ny orinasanao eo imason'ny masonao bebe kokoa, turbocharge ny varotrao, ampidiro ny toeran'ny mpanjifanao - ahoana no ahafantaranao ny tokony hampiasaina, ary inona no tsy raharahanao?
Mba hahatakarana ny fomba hanavahana ny varimbazaha amin'ny akofa, dia andao hojerentsika ilay masoivoho feno mikotrika izay manao zavatra tsara: Semalt.
Semalt dia serivisy SEO ary serivisy marketing izay naorina tamin'ny 2013. Ny orinasa dia masoivoho feno, midika izany fa afaka manolotra fampielezana marketing feno hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Izy io dia manana talenta manokana amin'ny sehatry ny SEO sy analytics, izay atolotra serivisy manokana maromaro.
Tao anatin'ny taona hatramin'ny niorenany dia i Semalt dia nitombo ho lasa varotra marketing iray manerantany. Rehefa avy nanadihady tranokala 1,5 tapitrisa izahay ary nirehareha mpampiasa 600000 mahery, dia lasa mpitondra haingana ny Semalt amin'ny sehatra SEO sy marketing ary tsy mampiseho famantarana ny fahaleovantena. Ny masoivoho dia tarihin'ny ekipa mahay sy talenta, izay afaka hihaona aminao eto izao!
"Tsara ihany izany sady tsara", hoy angamba ianao, "nefa ahoana no ahafantarako fa mendrika ny fotoana sy volako i Semalt?" Mba hamaliana izany fanontaniana izany dia mila mandinika akaiky ny serivisy ianao.
Semalt sy SEO
Inona no atolotry ny masoivoho momba ny serivisy SEO? Tokony ho mailo eo noho eo ny orinasa marketing ianao, izay mampanantena an'izao tontolo izao, na tsy sahala amin'ny hoe ahoana ny fomba fiasan'ny serivisy SEO, satria izany dia mariky ny hoe ho resy izy ireo na hoe mamitaka ny rafitra izy ireo hanolotra valiny haingana sy fohy .
Amin'ny tranga Semalt, ny orinasa dia manolotra serivisy SEO tokana: AutoSEO, FullSEO ary E-Commerce SEO, ary manao antsipirihany momba ny fiasan'ny tsirairay avy.
Tonga lafatra ho an'izay te-hanitrika ny tongony ho amin'ny tontolon'ny SEO, AutoSEO dia manolotra ireo tompona orinasa ho fampidirana haingana sy mahomby ary mahomby amin'ny fikarohana fikarohana. izany:
Manadihady ny tranokalanao
Fanamboarana ny mpivarotra
Misafidy teny fanalahidy
Mandefa tatitra tsy tapaka
Ary manao an'izany farafahakeliny $ 0,99 izany izy !
Ho an'ireo maniry hahita vokatra tena maharitra sy maharitra, dia tsy misy zavatra mampitaha ny fikasihan'olombelona fotsiny, ary izay indrindra no atolotry ny fonosin'i FullSEO Semalt. Makà fanadihadihana lalina, fanamafisana ary fanohanana avy amin'ny ekipa manam-pahaizana izay nitombo ny fifamoivoizana tranonkala any amin'ny firenena 177 samihafa. Raha mila fahombiazan'ny milina fikarohana ianao dia mila FullSEO.
Ny tranokalan'ny e-commerce dia manolotra fanamby somary hafa kely amin'ny tranokala izay tsy mivarotra an-tserasera an-tserasera. Ny tolotra SEO E-Commerce an'ny Semalt dia namboarina mba hamahana ireo fanontaniana tsy manam-paharoa natokana amin'ny fivarotana entana sy serivisy amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny fikatsoana ireo fangatahana fitaterana entana sy teny fanalahidy ambany ao amin'ny faritra voafaritrao, ary amin'izany no hahitanao ireo mpanjifa manokana tadiavinao.
Semalt sy analytics
Ny fahalalana dia hery. Azonao atao ny mandresy ny mpifaninana aminao fotsiny ary mitarika ny tsena raha takatrao ny mpifaninana aminao sy ny tsena. Ny masoivoho feno dia tokony hanolotra serivisy analytics feno izay manome ny orinasanao amin'ny fampahalalana rehetra ilainao hahomby.
Semalt Analytics dia ahafahanao manangana sary feno momba ny toeran'ny tsenanao. izany:
Ahoana no ataonao sy ny mpifaninana aminao
Zava-nisongadina ireo fironana tsena izay hanampy anao handroso
Miteraka fahitana izay hanampy anao hahita tsena vaovao.
Manorina sehatra fampahalalam-baovao izay ahafahanao manangana paikady momba ny fandraharahana feno.
Mitady ny ara-dalàna
Rehefa avy nanamarina ny tantaran'ny masoivoho ara-barotra ianao dia nanamarina fa feno tanteraka izy ireo, ary nanamarina fa manolotra serivisy manatsara, kalitao ary voaporofo fa tokony hisy ny orinasa ambony, fotoana tokony hitondra izany amin'ny vahoaka. Tsy misy fomba tsara kokoa hanamarina ny kalitaon'ny mpiara-miasa aminao amin'ny marketing fa tsy amin'ny alàlan'ny fihainoana an'ireo niatrika azy ireo taloha.
Ny fandalinana tranga dia fomba tsara handinihana tsara ny fomba fiasan'ny masoivoho iray, ary inona no azonao antenaina raha hampiasa ny serivisy ianao. Semalt dia manasongadina fandalinana tranga am-polony ao amin'ny tranonkalany, manome maso anao ny asan'izy ireo sy ny valiny.
Misy fomba tsotra hanamarinana ny maha-ara-dalàna ny masoivoho iray: mitsambikina an-tserasera ary jereo ny zavatra lazain'ny tranonkala eran'izao tontolo izao. Noho ny fahalalahana fampahalalana nomen'ny Internet, dia tsy hain'ny orinasa mihitsy ny manafina ny maha-izy ireo fa manao alalana fohy na tsy mampanantena akory izy ireo.
Zahao ny hevitra momba ny Google sy Facebook. Raha toa an'i Semalt, manana isa 4,5 / 5 ny Google Review ary manana isa Google Review 4.4 / 5 (miaraka amin'ny mpanara-dia 170.000) dia azonao atao ny matoky fa safidy tsara izy ireo. Semalt ihany koa dia manolotra ny jatony voasoratra sy lahatsary fijoroana vavolombelona eo amin'ny toerana, izay fanampiana mety ho mpanjifa hahazo ny fahatakarana ny mihitsy ny orinasa dia tahaka ny asa.
Zavatra tsotra iray izay afaka manampy ny manasaraka ireo maso ivoho tsara indrindra amin'ny ambiny dia relatability. Te hahafantatra ianao fa mifandraika amin'ny olona tena hahafantatra anao, ary izay hifalifaly dia hiara-miasa aminy. Raha mampiseho ny lafiny mahafinaritra azy ny masoivoho, dia famantarana lehibe izany.
Raiso ho ohatra ny fiasa amin'ny Semalt, ny Turbo Turtle. Izy dia lasa ampahan'ny ekipa Semalt rehefa nifindra tany amin'ny birao vaovao izy ireo tamin'ny 2014, izay navelan'ny mpanofa teo aloha azy. Ankehitriny izy mankafy fiainana ao anaty kianja midadasika, ary manana ny mombamomba ny mpiasa manokana (izy dia mpamoaka fanadihadiana) amin'ny tranokala!
Ny fahasamihafana Semalt
Amin'ny lafiny rehetra, Semalt dia manome drafitra tonga lafatra izay tokony tadiavina ao amin'ny SEO sy ny masoivoho marketing. Manome serivisy feno serivisy amin'ny famolavolana, tsara jerena, manana firaketana an-tsoratra voaporofo, ary manome izany rehetra izany amin'ny vidiny mahafinaritra.
Inona koa, rehefa niara-niasa tamin'ny orinasa saika tany amin'ny firenena rehetra teto an-tany ianao dia afaka matoky fa miteny ny fiteninao ny Semalt! Ny ekipa Semalt dia mahay amin'ny teny anglisy, frantsay, italiana, tiorka, ukrainiana, rosiana ary fiteny maro hafa.
Ka raha mitady maso iray afaka manampy amin'ny sehatry ny asa izay tokony alehanao ianao dia maninona raha mifidy Semalt?